Xildhibaano badan oo Saxiixay Mooshin ka dhan ah damaca dowlada Kenya | Baydhabo Online
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku mashquulsan diyaarinta mooshin ka dhan ah dowlada Kenya gaar ahaan ciidankeeda ku sugan gudaha Soomaaliya ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM.
Mooshinkan ayaa waxaa wada Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo ka careesan habdhaqanka dulmiga ku dhisan ee wado dowlada Kenya, waxa ayna Xildhibaanadan doonayaan in Kenya ciidankeeda kala baxdo gudaha Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa ayaa sheegay in Xildhibaano katirsan Baarlamaanka ay saxiixeen mooshinka ka dhanka ah dowlada Kenya, waxa uuna xusay in mooshinkaasi ay saxiixeen tiro badan oo Xildhibaano ku filan ah.
Waxa uu sheegay Xildhibaan Dalxa in Mooshinkan Baarlamaanka la horgeyn doono marka uu furmo kalfadhiga Baarlamaanka bisha soo socota ee September, waxa cadeeyay Xildhibaanka in marnaba ogolaan doonin damaca dhulka boobka ee Kenya wado.
Dowlada Kenya ayaa wado qorshe ay ku dooneyso in ay ku boobto biyaha iyo bariga Soomaaliya, waxa ayna Kenya sidoo kale faragalin ku heysaa arimaha Siyaasada Soomaaliya gaar ahaan doorashada hada ka socota Jubbaland.